Lakkoofsa firaakshinii man'ee keessatti galchiitii shallaggiif fayyadami.
Man'ee keessatti "0 1/5" galchiitii(mallattoo waraabbii malee)furtuu naqaa tuqi. Sarara naqaa gubbaa wardii jiru keessatti gatii 0.2 argita, kan shallaggiif fayyadu dha.
Yoo "0 1/2" galchite Ufmaa sirreessi arfiilee sadeen 1, / fi 2 akka arfii tokkoon bakka bu'an godha. Kan walfakkaatu 1/4 fi 3/4 irrattis ni raawwata. Bakka buusni kun caancala Meeshaalee - Ofiinsirreessaa - Dirqalaalee keessatti ibsama.
Yoo firaakshinee dijiitii danuu kan akka "1/10" arguu barbaadde, dhangii man'ee gara argii firaakshinii dijiitii danuutti jijjiiruu qabda. Baafata haallee man'ee baniitii, Man'eelee dhangeessi fili. "Firaakshinii" dirree Akaakuu irraa filiitii, achiin "-1234 10/81" filadhu. Achiin firaakshinoota akka 12/31 ykn 12/32 galchuu dandeessa - firaakshinootni, garuu, ufmaan hir'atu, akka fakkeenya dhumaa keessatti 3/8 agarttuuf.
Title is: Firaakshinoota galchuu